Cudurka Daacuunka: Sidee xal waara loogu heli karaa ka hortagiisa? W/Q: Dr. Yasin Abdi – Puntland Post
Posted on April 20, 2017 April 20, 2017 by Desk
Cudurka Daacuunka: Sidee xal waara loogu heli karaa ka hortagiisa? W/Q: Dr. Yasin Abdi
Meelo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo goobaha abaaruhu ku habsadeen ayaa la soo sheegayaa inuu ka dillaacay cudurka Daacuunku dhowaan. Aagagga qaarkood waxa la xaqiijiyey in dad ugu geeriyoodeen gaar ahaan goobo ka mid ah gobolka Bay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa adduunka u sheegtay in cudurka Daacuunka lagu arkay Koonfurta Soomaaliya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Shiinaha (Xinhua) 4tii bisha Maarso 2017 Tvga Aljazeera ayaa toddobaadkii hore sii daayey warbixin ka hadlaysa halista cudurka Daacuunku ku hayo dalka Soomaaliya. Halkan riix si aad u daawatid wararkaas
Cudurka Daacuunka ayaa inta badan ku soo noqnoqda waddamada geeska Afrika gaar ahaan waqtiyada abaaraha iyo xilliyada roobabku da’aan. Si aan wax uga ogaanno cudurka Daacuunka, Saxadoon.com (Waa degel qabyo ah kuna saabsan arrimaha caafimaadka oo dhowaan hawada soo geli doona) waxay qoraalkan soo socda idiinku soo gudbinaysaa warbixin kooban oo si guud u eegaysa cudurka Daacuunka iyo siyaabaha looga hortago. Waa maxay sirta aan dawada iyo tallaalka ahayn ee dunidu kaga adkaatay ka hortagga iyo xakamaynta cudurka Daacuunka?
Sawir muujinaya qaabka iyo jeedalka bakteeriyada Vibrio cholerae
Guud ahaan, Vibrio cholerae waxa loo baahan yahay qiyaas weyn 10,000-1,000,000 (104 – 106 organisms) si ay cudurka daacuunka u sababto. Halka, bakteeriyada kale qaarkeed loo baahan yahay qiyaas yar/hoose (lower infective dose). Tusaale ahaan, bakteeriyada Qaaxada ama TBda sababta ee Mycobacterium tuberculosis waxa loo baahan yahay qiyaas ka yar (<10 organisms) oo keliya.